Nick Sloane: ninka badbaadiyey markabkii Costa Concordia - BBC Somali
Nick Sloane: ninka badbaadiyey markabkii Costa Concordia
17 Sebtembar 2013
Image caption Nick Sloane
Iyadoo lagu hawshanaa sidii loo soo badbaadin lahaa hadhaaga markabkii Costa Concordia ee ku degey xeebaha Talyaaniga, ayaa waxa xagga farsamada hawshaasi wacdarro ka dhigay nin u dhashay Koonfur Afrika oo la yidhaa Nick Sloane.
Nick Sloane, da'diisu waa 52 jir, waxana hawshan u soo kiraysatay shirkadda la yidhaa Titan Salvage. Waxayna degganaayeen intii hawshan ay isku uu u diyaargaraynayeen isaga iyo kooxdiisu, jasiiradda Giglio ee Talyaaniga.
Image caption Markabka Costa Concordia
Nick waxa uu xirfaddani bilaabay 1980, waxanu ka bilaabaya shirkada qaabilsan soo badbaadinta maraakiibta halligma. Waxana looga yeedhay meelo badan oo aduunka ah oo kala duwan , oo maraakiib iyo diyaarado dhacay intaba lagu jirey hababkii loo soo saari lahaa. Meelahaasi waxa ka mid ah oo ay u dhaxeeyaan min Yemen ilaa iyo New Zealand.
Nick Sloane waxa uu sheegay inuu la joogayo markabkaasi la soo saaray ilaa uu ka dhaqaaqayo markabku oo uu mar kale gooshayo. Markii la soo saaray markabka, nick waxa uu sheegay in uu ku faraxsan yahay in imika ay seexan karaan. Nick waxa uu leeyahay xaas iyo laba qof oo mataano ah oo 17 jirro ah, iyo ilmo kale oo 10 jir ah.